IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Networking Problems » IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem]
1 IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 29th November 2009, 4:10 pm
peer to peer network တည်ဆောက်တဲ့အခါ IP address ကို (192.168.)နဲ. စတဲ့ နံပါတ်ပဲပေးလို.ရတာလား။ တခြားနံပါတ်တွေရောပေးလို.ရလားသိချင်လို.ပါ။ ကျနော်တွေ.ဖူးတဲ့IP address တွေက (192.168.)နဲ. စတာပဲများလို.ပါ။
2 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 29th November 2009, 4:35 pm
အောက်ကလင်ခ့်က ပိုစ့်လေးတွေဖတ်ကြည့်ပါ။ အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
3 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 29th November 2009, 5:03 pm
lichinghwee wrote: peer to peer network တည်ဆောက်တဲ့အခါ IP address ကို (192.168.)နဲ. စတဲ့ နံပါတ်ပဲပေးလို.ရတာလား။ တခြားနံပါတ်တွေရောပေးလို.ရလားသိချင်လို.ပါ။ ကျနော်တွေ.ဖူးတဲ့IP address တွေက (192.168.)နဲ. စတာပဲများလို.ပါ။
အင်တာနက် မသုံးဘူးဆိုရင် တော့ ကြိုက်တာ ပေးလို့ရပါတယ်....အင်တာနက် ချိတ်ထားရင် တော့ အွန်လိုင်း IP နဲ့ ညှိတော့ မညှိတဲ့ IP ပဲ ပေးလို့ရပါတယ်....ဥပမာ .. 192.168.1.1
4 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 4th December 2009, 8:27 am
ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ Local ဆိုရင်ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် IP Range တူရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက စက်တွေအကုန်လုံးဟာ 192.168.0.* ဖြစ်ရပါမယ်။
* နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဂဏန်းပါ။ 1 ကနေ 255 အထိပေါ့။
ရှေ့က 192.168.0. အထိတူပါမှ Files & Printer Sharing သုံးလို့ရမှာပါ။ ပြီးရင် Workgroup တူရပါမယ်။
ဥပမာ - ကျွန်တော်က IP Star သုံးတော့ အဲဒါနဲ့ပဲရှင်းပြမယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့ IP Star ရဲ့ WAN နံပါတ်က 172.20.36.201 ဆိုပါတော့။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က Wireless Router ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအထိမှာ IP ပြန်ချိန်းတယ်။ Router ထဲကို 172.20.36.201 ကိုဝင်ပြီးတော့ Router ကနေ 192.168.0.1 ဆိုပြီးပြန်ထုတ်တယ်။ ဒါအလွယ်ပြောတာပါ။ သူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်လဲ မမှတ်မိပါဘူး။
အဲဒီတော့ ကျန်တဲ့စက်တွေကနေ အဲဒီ 192.168.0.1 ဆိုတာကို Default Gateway အဖြစ်ထားပြီး ကျန်တဲ့ IP တွေကို 192.168.0.2 ကနေစပြီးပေးကြပါတယ်။ 192.168.0.255 အထိပေါ့။
အဲဒီလိုမှ IP တွေလိုက်မပေးချင်ဘူး။ Default Gateway မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Server OS တင်ပြီး DHCP နဲ့သာ Run လိုက်တော့။ DHCP ဆိုတာကတော့ ---------------------------------------- နောက်မှပဲ တင်ပေးတော့မယ်။
5 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 5th December 2009, 11:05 am
IP star IP တွေက fix တွေလားဗျ။
6 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 5th December 2009, 11:18 am
ဘယ်လိုလဲအစ်ကို။ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ အစ်ကိုမေးတာကို။ သူပေးထားတဲ့ IP ကတော့ ပြောင်းလို့မရဘူး။
172.20.36.201 ဆိုတဲ့ IP ကို 128 ယူထားမယ်ဆိုရင် စက် ၃ လုံးသုံးလို့ရမယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့က Router ခံပြီး 10 လုံးလောက်ပြန်သုံးတာလေ။ Router မခံဘူးဆိုရင် ၃ လုံးပဲရမယ်။ 172.20.36.202, 172.20.36.203, 172.20.36.204 အထိပေ့ါ။ Router ခံလိုက်တော့မှာ 192.168.0.1 ကနေ 255 အထိဖြစ်သွားတာ။
7 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 5th December 2009, 11:21 am
ဒါနဲ့...အဲလိုသုံးတော့ ဘာမှတော့ ပြသနာမရှိဘူးမို့လား...အကုန်လုံးပေါ့
8 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem] on 5th December 2009, 11:26 am
ဟင့်အင်း...မရှိပါဘူး။ အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုရင် Wireless တွေရော Cable တွေရော အကုန်စုံအောင်သုံးတာ။ ရပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
9 Re: IP address နဲ.ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို.ပါ [Problem]